राहात बोके’र कृष्ण कंडेलको इन्द्रेणी टिम सि’न्धुपाल्चोक तर्फ… – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/राहात बोके’र कृष्ण कंडेलको इन्द्रेणी टिम सि’न्धुपाल्चोक तर्फ…
राहात बोके’र कृष्ण कंडेलको इन्द्रेणी टिम सि’न्धुपाल्चोक तर्फ…
काठमाडौं, असार २५/ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीको बाढीले १५ घर बगाएको छ भने एक दर्जनभन्दा धेरै मनिस बाढीले बगाउँदा वेपत्ता भएका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिकाको जम्बु भन्ने ठाउँमा बाढीले घर बगाएको हो ।
स्थानीय अनन्तप्रकाश श्रेष्ठका अनुसार १४ घरका १९ जना हराइरहेको र दुई जनाको शव फेला परेको छ । बाढीमा हराइरहेकाहरुको खोजी कार्य भैरहेको उनले बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपानेले बाढीले घरहरु बगाएको र केही व्यक्ति वेपत्ता भएको बताउनुभयो ।
जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ । यस्तै आपतोल भन्ने ठाउँमा पक्की पुल बगाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयको अघिको पुल र अरनिको राजमार्ग समेत बाढीले बगाएको प्रहरी निरीक्षक न्यौपाने जानकारी दिनुभयो ।
घर बगाएको ठाउँ मवाट चार किलोमिटर मात्रै रहेपनि सडक नभएकाले दुई घन्टा लाग्ला म त्यतै जाँदैछु,’ प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेले भन्नुभयो । बाह्रबिसेको जुरेदेखि नै बाटो अबरुद्ध भएकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले कृष्ण कंडेल सहितको इन्द्रेणी टिम सिन्धुपाल्चोक तर्फ राहात सहित काठमाडौं बाट हिंडि सकेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीको बाढीले १५ घर बगाएको छ भने एक दर्जनभन्दा धेरै मनिस बाढीले बगाउँदा वेपत्ता भएका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिकाको जम्बु भन्ने ठाउँमा बाढीले घर बगाएको हो ।
यिनै हुन् सन्तोषीको ह.त्या गर्ने २१ वर्षीय युवक, यस कारण गरे ह.त्या (भिडियो)
बोक्सी आ’रो’प’मा प्रहरीकै अगाडी महिलामाथी नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट !शरीरभरी नि’ल’डा”म भएकी उनी आफ्नो मु”न्टो चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा छिन्
राम बाबु काकीृले १० बर्षीया बालिका लाई बला त्कार गरेको घटना बाहिर आएको छ!!
झरना घुम्न आएकी २८ वर्षीया निशाको अचानक रुख ढलेर किच्दा मृत्यु, तीन गम्भीर घाइते
कोभिड खोप वितरण गर्ने कोभ्याक्स सुविधा के हो? यसले कसरी काम गर्छ?